I-China Dongshen okunethezeka okuthambile kwesikhumba-okwembuzi yoboya bezinkuni isibambo sobungcweti sebhulashi setha Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
I-Dongshen yokunethezeka ethambile yesikhumba enobungane yezimbuzi yezinkuni isibambo sokhuni esenziwe ngobungcweti
Isethi ye-15pcs yobungcweti bokwenza ibhulashi yenziwa ngoboya bezimbuzi, i-ferrule yethusi nesibambo sokhuni. Izinwele zezimbuzi zithambile futhi zibushelelezi, futhi zinamandla okubamba impuphu. Umklamo wesibambo osezingeni eliphakeme awusheleli, ubambelele ngokuqinile, futhi ngeke ukhathele ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Inketho engcono kakhulu yabaculi bezimonyo!
Okuxekethile powder ibhulashi: I-brushed powder makeup inokuthungwa okuyisilika, futhi ubuso bezimonyo buhlanzekile futhi buhlala njalo.
I-Concealer brush: Ikhanda lebhulashi elihle lingashayela izindawo okunzima ukufinyelela kuzo, futhi umphumela wokufihla ufana kakhulu futhi ungokwemvelo.
Ibhulashi elinamahloni: Hlikihla okufiphele nge-curvature yemvelo, ukuhlanganisa izithunzi, nokugqamisa kahle ukubukeka kobuso.
Ibhulashi le-Eyeshadow: Izinhlobonhlobo eziningi. Kudingeka ulungiselele amabhulashi wethunzi losayizi ohlukile ukufanisa izindlela ezahlukahlukene zokwenza iso.
Ibhulashi leshiya: Nge-eyebrow powder, ingadweba isimo seshiya semvelo. Kulula ukulawula ukuqina nomthunzi kunepensela yamashiya.
Ibhulashi lezindebe: Chaza ngokunembile ukuma kwezindebe, yenza izindebe zigcwale futhi zifane kakhulu, futhi zihlale isikhathi eside.
Ibhulashi lesisekelo: Isetshenziselwa ukufaka isisekelo samanzi, izidingo zamabhulashi nesisekelo samanzi ziphakeme kakhulu.
Ibhulashi lentaba ebusweni: Isici ukuthi inhloko yebhulashi ingu-45 °, ubukhulu bufana nebhulashi elinamahloni, futhi ama-bristles ajiyile.
Izinwele masemoyeni Izinwele zezimbuzi, izinwele Zokwenziwa
- ISETHU SOBUHLE ESIPHELELE yamabhulashi okwenziwa ngobungcweti, konke okwethulwe kahle esikhwameni sesitayela sokwenza ibhulashi sokugcina amabhulashi akho uwasebenzise, ​​ekhaya noma lapho usohambweni.
- ISANDLA ESIPHAKEME IZINGA:Ngokhuni lwekhwalithi neferrule ngokuhlangana. Kukhanya futhi kunethezekile, noma ngabe usebenzisa amabhulashi isikhathi esingakanani, ngeke uzizwe ukhathele. Ukungasheleli, ukubamba okuqinile, ungasebenza kangcono ngamabhulashi ahlukahlukene wokukwenza, ukukunikeza umuzwa omuhle kakhulu womkhiqizo.
- ISIPHO ESIPHELELE: Awunakucabanga ukuthi le brashi yamakhemikhali esethiwe ithandwa kangakanani ngabesifazane. Noma ngabe unikezwe wena noma njengesipho kubangani bakho besifazane, kuzokwenza abantu bakhamuluke, bonke abesifazane abafisa ubuhle Kusifanele isipho esiyigugu kangako.
Langaphambilini I-Dongshen makeup brush i-vegan enobungane ethambile izinwele zokwenziwa ze-orange isibambo sokwenza ibhulashi isethi
Olandelayo: I-Makeup Brush Holder Organer Bag Isikhwama Somculi Oyingcweti Isikhwama Sokumisa I-Makeup Cup Cup Amanzi Uthuli-Ubufakazi Bokugcina Isikhwama Sesikhwama
Isethi Yokwenza Ibhulashi Ngokwezifiso
Isethi Yebhulashi Lobuso Buso
Umkhiqizi Wokwenza Ibhulashi
I-Makeup Brush Setha Okunethezeka
Dongshen ngokwezifiso ilebula yangasese wholesale vegan c ...
I-Dongshen professional makeup brush isethi yokwenza t ...
I-Dongshen okunethezeka kwezimbuzi zezinwele zezimonyo ...
7pcs brown vegan zokwenziwa izinwele isibambo esimnyama mi ...
Ikhwalithi ephezulu yesikhumba enobungane izinwele zokwenziwa ...
Ithuluzi Brushes Brushes, Yenza amabhulashi, Setha i-Makeup Brushes, Ukushefa Setha, Ukugunda Izinwele, isethi yokwenza ibhulashi,